4:37 PM Android Apps 11 comments
Android သမားတွေအတွက် အရမ်းလန်းတဲ့ Free Call ခေါ်လို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲအလန်းလေးပါ ။
ထိုဆော့ဝဲကို အသုံးပြုရာတွင်လဲ ဘာအကောင့်မှလုပ်စရာမလိုပါဘူး ။ မိမိဖုန်းခေါ်လိုသော ဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်ပြီး တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုနိူင်ပါတယ် ။ ကိုယ်ခေါ်ဆိုသော တစ်ဘက်ဖုန်းမှာ အင်တာနက်ရော ထိုဆော့ဝဲရောရှိစရာ လုံးဝမလိုပါဘူး ။
သင်ထိုဆော့ဝဲကို အသုံးပြုရာတွင် သင့်အား $.30 ကျပ်ပေးထားပါတယ် ထိုပိုက်ဆံနှင့် သင်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် အကယ်၍Freeပေးထားသော ထိုပိုက်ဆံကုန်သွားပါက ပိုက်ဆံထက်ဝယ်စရာမလိုပါဘူး သင့်ဖုန်းSettings ထဲသွားပြီး Clear Data သို့မဟုတ် Uninstall လုပ်ပေးလိုက်ပါက အရင်တိုင်းပိုက်ဆံပြန်ရောက်လာပါတယ် ။
မရောက်လာဘူးဆိုပါက သူ့ဆော့ဝဲထဲမှာ Get free credits for calls ဆိုတာရှိပါတယ် ဝင်လိုက်ပါ ။ အဲဒီမှာ Free ပေးထားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုခုကို ဒေါင်းလိုက်ပါ ။ ပြီးသွားရင် ပိုက်ဆံအမောက်ပြထားတဲ့ဘေးက Reflash လုပ်တဲ့ မြှားအဝိုင်းလေးတွေ့ပါမယ် အဲတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပိုက်ဆံတိုးလာပါလိမ့် ပထမဖရီးပေးတဲ့ ပိုက်ဆံထက်တောင် ပိုများလာတတ်ပါတယ်
Market မှာ အခုနောက်ဆုံထွက်ဆော့ဝဲကို လိုချင်သူများ အောက်မှာဒေါင်းယူပါ
Market ကို ဝင်လို့ရသူများက Play Store မှာဖရီးပေးထားပါတယ် သွားရောက်ဒေါင်းယူနိူင်ပါတယ်
Tap4Call - free phone calls V1.3.4 For Android ကို လိုချင်သူများ ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ... :-)
ရေးသားသူ itpalacecomputer at 12:31 AM
.AndroidPhone Application တွေကို Phone Intern...
patten lock ဖြေရန်unlock pattten မေ့သွားခဲ့ရင်.......
သွားဖြူစင်နည်းသွားများဖြူဝင်းစေဖို့ သီးမွှေး ဌက်ပျေ...
Original Contact နဲ့ Dialer တွေမသုံးချင်ဘူးရိုးနြေ...
For Man Only အခုတင်ပေးမဲ့ application လေးကတော့ အမ...
Facebook Original ကြီးကိုသုံးရတာ စက်ဟန်းတယ် Logout...
Gmail.apk နှင့် mail သုံးရင် ဖွင့်မရဘဲ ပိတ်သွားသူမ...
Android အတွက် Apk ဖိုင် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖန်တီးမယ်လ...
Tap4Call - free phone calls V1.3.4 For Android4:37...
FaceFighter Gold v1.04 Pro - For Android Android စ...
Stupid Zombies2အရင် Stupid Zombile ဂိမ့်းထွက်...
Android ဖုန်းတွေက ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဖိုင်လ်တွေ ပြန်စီေ...
ZDbox v3.9.285( Root Task Killer ) For Android
Android ဖြင့် စာရင်းကိုင်လုပ်လို့ ရမယ့် မြန်မာ့စာရ...
Android ဖုန်းများအတွက် bomber mine game apk
Mr. Bones 2001 Hollywood Movie
Hosting ဆိုဒ် (၃၃) ဆိုဒ်မှာ upload တင်နည်း
Android ဖုန်း ကိုင်သူတွေ အတွက် အလန်းစား Launcher
MRTV4 ဖုန်းပေါ်မှာ ကြည့်ချင်သူများ ဒေါင်းနိုင်ပြီနေ...
Android ဖုန်း အတုနဲ့ အစစ် ခွဲခြားဖို့အတွက် ရ...
Huawei ဖုန်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ လက်ကိုင်ဖုန်း h...
Mobile Phone Software Course ( Android + i-OS ) Ha...
Huawei U8818 ကိုRootလုပ်၍မြန်မာFontsထည့်နည်း ........